သငျသညျရိုးရှင်းသေးလက်တွေ့ကျကျ features တွေနဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ကစားတဲ့ဂိမ်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဥရောပကစားတဲ့ သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤသည်၌ အခမဲ့ကစားတဲ့ဆိုက်ကိုအပိုဆု, သင့်ထံမှနံပါတ်များနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ် 1 သို့ 36 နှင့်တစ်ခုတည်းသုည. အဆိုပါနံပါတ်များကိုကျပန်းအဆိုပါကစားတဲ့ဘီးပေါ်တွင်အခြားအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်အစက်အပြောက်အပေါ်မှတ်သားထားတဲ့. ဒီဂိမ်း၏ 3D ဂရပ်ဖစ်ဘီးတစ်ဦးအနီးကပ်တက်အမြင်နှင့်အတူတစ်ဦးလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကကမ်းလှမ်း. ဒါကြောင့်သင်ကဘောလုံးကိုလူးအဘယ်မှာကြောင့်မြားကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးမွငျနိုငျ. ဒီမူကွဲတစ်ခုအပွေးပွိုငျလမျးလောင်းကစား option ကိုလည်းရှိပါသည်. ဒီဂိမ်း၏အလောင်းအစားကန့်သတ်အနေအထားနှုန်း£ 100 အများဆုံး£ 0,20 ၏နိမ့်ဆုံးနဲ့စတင်.
ဤသည်ပညာရှင်ပီသစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲ အခမဲ့ကစားတဲ့ဆိုက်ကိုအပိုဆု ဂိမ်း NetEnt အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သော slot နှစ်ခုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလောင်းကစားရုံအမျိုးအစားကနေဂိမ်းတွေရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး developer များတစ်ခုမှာ, စားပွဲနှင့်တိုက်ရိုက်ကုန်သည်ဂိမ်း.
ဒီရိုးရှင်းတဲ့အတွက် အခမဲ့ကစားတဲ့ဆိုက်ကိုအပိုဆု ဂိမ်း, သငျသညျပွငျပကစားနည်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောနံပါတ်များပေါ်တွင်သင်၏ကစားနည်းထားနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအမြင့်ဆုံးဆုလာဘ်အနိုင်ရနိုင်မည့်အနေအထားနှင့်အတူဖြောင့်တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါသည် 35 သင်၏စုစုပေါင်းလောင်းကစားပမာဏ၏ကြိမ်. သင့်ထံမှအနိုင်ရနိုင်သည်ကိုပိုပြီးလေးကွဲပြားခြားနားသောအတွင်းပိုင်းကစားနည်းရှိပါတယ်. အဆိုပါအုပ်စုခွဲနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနံပါတ်များကိုပါဝင်ပါသည်နှင့်ချေ 17 တဦးတည်းမှဘောလုံးသူတို့အားနှစ်ခုမဆိုပေါ်ဆင်းသက်သည့်အခါ. အလားတူပင်, လမ်းပေါ်မှာ၏လစာနှင့်အတူတစ်ကော်လံသုံးခုနံပါတ်များရှိပါတယ် 11 တ. ထောင့်လေးနံပါတ်များကိုပါဝင်ပါသည်နှင့်ချေ 8 တ. နောက်ဆုံး, ခြောက်လနံပါတ်များရှိကြောင်းမျဉ်းချေ5သင်၏စုစုပေါင်းအလောင်းအစားအပေါ်တ.
ဒီ slot ကအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ကအွန်လိုင်း slot နှစ်ခုမသိုက်မိုဘိုင်းနှင့်ထပ်မံကစားရနိုင်ကြောင်း, သင် reels အပေါ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဂြိုလ်ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများဆင်းသက်လျှင်ဆုကြေးငွေ features တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်. သင်သည်ဤအကျင့်ကိုအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ် အကယ်., ပြီးနောက်သင်တဆယ် posh အခမဲ့လှည့်ခြင်းများပေးထားပါလိမ့်မည်. တိုင်းဒီပတ်ပတ်လည်အတွင်းမှာလုပ် 2x အားဖြင့်များပြားစေမည်ဖြစ်ပြီးရိုင်းပါဝင်ပတ်သက်လျှင်ထို့နောက်သူက 4x အားဖြင့်များပြားစေမည်ဟုမိန့်အနိုင်ရ. သငျသညျအလုံအလောက်ကံကောင်းဖြစ်ကြပြီးနောက်ထပ်သုံးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေဆင်းသက်ဖို့နောက်ထပ်နိုင်ကြသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်သူကသင်လှည့်ခြင်းများ re-ဖြစ်ပေါ်စေမည်.
လောင်းကစားအပြင်ဘက်တွင်: သင့်ထံမှအနိုင်ရနိုင်သည်ဟုပြင်ပတွင်ကစားနည်း၏ငါးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. အနီရောင်-အနက်ရောင်, High-အနိမ့်, ထူးဆန်း-ပင်, ကော်လံနှင့်တစ်ဒါဇင်အဆိုပါရာထူးများမှာ. ဒီမှာဆုကြေးငွေများမှာ 1 သို့ 1 အတူကော်လံနှင့်တစ်ဒါဇင် မှလွဲ.2သို့ 1. ဤအလောင်းကစားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအတွင်းပိုင်းကစားနည်းထက်တော်တော်လေးပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်ဤအရပ်မှတစ်ဦးအနိုင်ရ mode မှာသငျသညျစောင့်ရှောက်.
ဂိမ်းရလဒ်များ: ဤ အခမဲ့ကစားတဲ့ဆိုက်ကိုအပိုဆု ဂိမ်းရဲ့အဓိက screen ပေါ်မှာနောက်ဆုံးတစ်ဆယ်ဂိမ်းရလဒ်များကိုပြသ. သငျသညျနောက်ဆုံး၏ရလဒ်များကိုပြသတဲ့သမိုင်း tab ကိုလည်းရှိပါသည် 100 ဂိမ်း. ဤရွေ့ကား stats သင်သည်သင်၏အနာဂတ်ဂိမ်းတစ်ခုထက်ပိုသောထိရောက်သောနည်းဗျူဟာနှင့်အတူဆော့ကစားကူညီပေးရန်.
သင်အလွယ်တကူအနိုင်ရကူညီဖို့စိတ်ကို-မှုတ် 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် features တွေနှင့်အတူ, ဤ အခမဲ့ကစားတဲ့ဆိုက်ကိုအပိုဆု ဂိမ်း၏နိမ့်ဆုံးအိမ်သူအိမ်သားအစွန်းရှိပါတယ် 2.7%.